Hatramin’ny fahiny, ny fiaraha-monina manoro hevitra ny olona tsy mba hanantonana manodidina ny sisin ny namany. Izany hoe, tsy ilaina mba hamitahany ny vehivavy manambady. Fa raha ianao marina no tena tianao, na inona na inona dia zavatra tsy hainy, ary afa-tsy vehivavy manambady mba hamitahany ary na dia mora kokoa. Fanontaniana inona araka ny hevitrao, moa ve tsy misy dikany ny mitady ny mpivady mba hanokatra indray ny Mampiaraka toerana toy izany — ny valiny Alohan’ny hihaona amin’ny vehivavy manambady, dia tokony ho fantatrao hoe nahoana ianao no mila izany. Raha ny marina, izao tontolo izao feno tsy manam-bady ny hatsaran’ny, izay faly hiaraka aminao ny cinema cafe am-pandriana. Fa raha toa ianao ka tia dia tsy maimaim-poana ny vehivavy iray, dia tsy maintsy mitandrina ny fantaro ny fitsipika. Tsy afaka mianatra mba hamitahany miaraka amin’ny vadiny sy ny rain’ny ny manam-pahefana ny olona iray. Raha ny marina, dia afaka, raha toa ka tsy maintsy lafo ny fahasalamana, ary na dia ny fiainana. Dia mazava fa ny fampiharihariana ny hevitry ny zava-misy ny fanitsakitsaham-bady, ny fofombadiko no ho voatery niala ny trano, ary ianao ratsy nokapohina. Izany dia azo atao mba hitsena ny ampakarina. Tsara, dia aoka izy ireo hankafy ny fahasambarana an ny tanora, izay manao ny marina nijaly nandritra ny volana maro. Voalohany, fotsiny ianao dia tsy mahita na dia nametraka mivantana any am-pandriana. Eritreritra rehetra ny vadiny ny tanora tanora be atao vadiny. Noho izany dia tokony miandry roa taona, raha ny voalohany fitiavana mandalo, ary tsy ho afa-tsy ny fahadisoam-panantenana. Izany dia azo atao mba nahalala ny tsy faly ny vehivavy manambady. Tsy fantatrao izay ny fahoriana eo amin’ny zava-pisotro mandeha mamono. Toy izany ny fianakaviana iray dia tsara kokoa ny tsy miakatra, dia tena tena feno habibiana. Raha misy, mianika afaka, raha toa ka mandray azy dia mahazo manambady. tompovavy dia very, ary buddy dia hahazo. Eny, ny namana faniriana lalina araka ny fahatelo hilaza aminy ny momba ny vadiny dia ny fanafoanana ny Fomba boaty amin’ny asa mivelatra ho feno fianakaviana sambatra izay misy sahady taona vitsivitsy, ary tsara izany raha efa miaraka amin’ny ankizy. Faly ny vehivavy avy amin’ny cozy, tamim-pitiavana mamy akanim-borona tratra. Dia ny tsara sy ny aina, ny tena mankaleo. Eto izany no miandry anareo. Kely nahafinaritra ny vehivavy dia tsy mandratra, fa ny fahalalahana dia tsy loza. Mba hihaona toy izao ny vehivavy any amin’ny toerana rehetra ao amin’ny Valan-javaboary, ny tranom-Bakoka, ny fampirantiana, ny fivarotana, amin’ny asa, fa fotsiny eny an-dalambe. Amoron-dalana, tsy mahazo mandray anjara, satria mpiara-mpiasa dia tsy jamba, azo antoka fa ho tsikaritrao fa misy zavatra. Ary BFF tsy malahelo ny fahafahana mibitsibitsika ny momba azy ny vadiny. Ao amin’ny café afaka mipetraka manaraka azy teo amin’ny latabatra amin’ny famantarana ny andian-teny»dia toy izany, ny tovovavy tsara tarehy manao irery.». Nandritra ny fampirantiana na ao amin’ny tranom-Bakoka ianao afaka ny ho tonga sy hadihadio ny fampirantiana. Eny an-dalambe hangataka ny fotoana na ny lalana. Za-draharaha seducers, dia nanontany ny fomba ny trano fisotroana kafe akaiky indrindra, mitantana avy hatrany mba hahazo ny vehivavy iray. Raha toa ka tsy manana drafitra, dia tsy mety manaiky sy hanoro ny lalana, sy ny hamela ny tenanao kafe fifaliana. Ao amin’ny Zaridaina dia afaka mangataka ny antso amin’ny finday, izay dia lazaina fa very amin’ny ahitra. Ary afaka mangataka fotsiny noho ny telefaonina, ny»miantso ny namana, satria ny finday no maty».
Amin izany dia hahazo ny isa an-tariby. Feno amin’izao fotoana izao, dia tsy mahamenatra toetra, ary ny vehivavy»ao amin’ny vatana»nitady rehefa avy teo anivon ny olona ary koa ny manify. Fomba fiasa mba hihaona amin ireo vehivavy manana ny toetra. Mifidy ny toerana mety ho anao mba hijery. Raha tianao ny miresaka ao amin’ny rivotra madio, dia tsara kokoa ny manatona ny vehivavy manintona na inona na inona toerana mangina. Ny safidy tsara indrindra izany — ny tanàna, ny Zaridaina, ny kianja, quay sns. raha tsy misy rivotra, handeha ho nitsangantsangana na nipetraka teo amin’ny dabilio ny vehivavy sy ny manontany ny fanontaniana rehetra izay mitaky ny tsy maintsy valiny. Ohatra, anontanio ny fomba hahazoana ny toerana sy ny anaran ny toerana izay tsy mahafantatra ny tenanao, ary izay teo akaiky teo. Anontanio ny vehivavy hihazona anao sy izy, raha tsy an-tsaina, manomboka ny resaka sy hahafantatra tsara kokoa. Hihaona ny vehivavy ny tsara bika ao amin’ny iray amin’ireo andrim-panjakana ho an’ny fialan-tsasatra. Lanja tafahoatra matetika ny vehivavy no mandeha isan-trano fisotroana kafe, satria matetika toy ny mihinana zavatra matsiro. Tonga ny latabatra, ao aoriana izay mipetraka eo amin’ny vehivavy sy ny mangataka raha toa ka saina raha, raha ianao no mipetraka manodidina. Manolotra ny voly azy amin’ny ny amin’izay ho lany, ary hitsena azy eo anelanelan’ny maniry mba hanatsarana ny endriny.
Misy fomba maro Mampiaraka
Ohatra, izany dia ampy hahatonga ilay ramatoa fiderana momba ny tarehimarika na mba hanampy azy ho tsara hanao asa manokana ny fanatanjahan-tena mba hihaona soa aman-tsara ary manomboka mifandray. Mandoa ny saina ho ny mpiara-miasa aminy, na ny mpiara-mpianatra tany amin’ny Oniversite. Angamba anisan’ireo azy misy tovovavy feno ny matavy, ary noho izy ireo mianatra sy miasa miaraka aminao, izy ireo dia afaka mora amintsika ny hahita ny fiteny iraisana ary hamoha ny fangorahana aminareo. ny ara-batana famaritana sy sary, izay dia mety ho tsy misy misafidy ny mpiara-mitory ny mety habeny. Ankoatra izany, amin’izao fotoana izao matavy ny vehivavy dia manan-danja ampy ao an-tery faribolana ny olona, noho izany dia matetika tena tsy te-hihaona, ary foana koa ny any ny fifandraisana. Tsara tarehy mora ny mahazo ny mahafantatra tia ny vehivavy iray miaraka amin’ny fanampian’ny ny tambajotra sosialy. Fotsiny mandefa ny hafatra mangataka ny mba hihaona sy hiresaka. Ny sasany tia mba hahatonga ny olona liana tao amin’ny interlocutor, famoahana ao amin’ny pejiny mampihomehy olom-pantatra amin’ny ankizy namany na havany — tsy ho foana ny dingana tsotra. Ny ankizy hieritreritra kely fomba hafa noho ny olon-dehibe, toy izany koa fa izany fivoriana izany dia mila manomana tsara ho haingana hahita ny ankizy amin’ny fiteny iombonana. Mialoha manontany ny ray aman-dreny ny ny zaza firy taona izy, inona ny tiany hatao ny nanam-potoana, ary koa ny fomba fihetsiky ny fivoriana miaraka amin’ny olon-tsy fantatra. Toy izany ianao dia afaka miomana tsara kokoa ny fihaonana voalohany, eritrereto ny fomba fitondran-tenany amin’izao fotoana izao, ary ahoana no hanombohan-dresaka miaraka amin’ny ankizy. Miezaha mba hanambatra ny fivoriana miaraka amin’ny fahafinaretana, izay dia ho afaka ny handray anjara ny ankizy. Ohatra, afaka hihaona amin’ny zoo, ny fampisehoana, ny mandeha any amin’ny sarimihetsika, na mitsidika ny trano fisotroana kafe. Amin’ity tranga ity, ny ankizy dia ho foana ny toe-po tsara, ary ianao dia ho afaka ny hahatsapa bebe kokoa malalaka nandritra ny resadresaka. Ianao ihany koa ho afaka hahita ny lohahevitra ny adihevitra, ohatra, mba hiresaka momba ny mahery fo ny sariitatra miara-misafidy ny matsiro fifaliana, sns. Voatery hanao ny zaza kely fanomezana. Izany dia afaka ny ho kilalao na mamy. Raha fantatrao ny Fialam-boly, dia afaka manome, ohatra, ny new echec napetraka, tsara ny boky, sns. miara-Raha toa ka ianao ao amin’ny trano fisotroana kafe, aza misalasala manontany ny ankizy momba ny zavatra tiany mba hihinana, ary izany dia ho toy ny didy. Manontany mikasika ny fomba zava-mitranga amin’ny namana vaovao, izay zava-mahaliana ny zava-nitranga niaraka taminy nandritra ny fotoana farany. Ny ankizy ny fiainana matetika no tena mavitrika, ary izy mety hilaza aminareo ny tantara mampihomehy avy any an-tsekoly ny fiainana, fifandraisana amin’ny namana, sns. aza adino ny fiderana azy, ny ankizy toy izany dia be. Lazao ny ankizy ny zavatra mahaliana momba anao. Ohatra, mamaritra ny fiara, any amin’ny tany izay efa nisy, ny asa. Aoka ny zaza mangataka aminao momba izay izy no tena liana. Afaka na dia ento miaraka aminao ny sasany ny Fahatsiarovana toy ny seashells, fanangonana ny vato, ody sy ny hafa ny zavatra kely. Manome zavatra iray mba ny vaovao mpiara-mitory tamiko. Tsy hijanona kely ka miezaka mandray anjara amin’ny asa rehetra ny ankizy nandritra ny fivoriana iray niaraka taminy. Raha izy nipetraka milalao ny milina, handray anjara amin’ny lalao. Mitaingina miaraka amin’ny carousel, hitifitra eo amin’ny tsipika, etc. Tsarovy fa ny ankizy dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa»amin miray feo»miaraka aminy. Amin’ity tranga ity, dia hitsahatra ny traikefa tightness ary kely ny tahotra, ary ianao dia ho afaka hahafantatra azy bebe kokoa, ary hahatakatra ny fomba tsara indrindra mba hanorina fifandraisana. Ary tsarovy fa ny voalohany tokony tsy lava loatra mba hitondra ny zanakao avy amin’ny ray aman-dreniny na mpiara-mianatra na amin’ny fotoana izy dia leo sy may manomboka miahiahy
← Mampiaraka ao Filipina ny lahatsary amin'ny Chat
Mahazo ny ankizivavy olon-tiany avy any ivelany, miaraka amin'ny vahiny. Iraisam-Pirenena Mampiaraka →